I-Ardor 3: Isingeniso | Kusuka kuLinux
Ngiyethemba ukuthi usuvele unayo i-GNU / Linux yakho isilungele umsindo we-latency ephansi, ngoba sizoqala ukusebenza nayo, noma ngabe singabalandeli bezintambo zikagesi noma i-inveterate metalheads, sizodinga i-DAW efanelekile futhi, ngenhlanhla, i-Ardor 3 ufike kithi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. Iyatholakala ezindaweni zokuphumula ze-KXStudio, lapho ivuselelwa khona izinsuku ezi-2 noma ezi-3 ngaphandle kokukhishwa kwenguqulo esemthethweni (khumbula ukuthi u-Ardor uqalile umjikelezo wezibuyekezo ezisheshayo ngale nguqulo entsha).
Ekuthumeni kwanamuhla sizohlala nezisekelo zesikhombimsebenzisi sayo.
Okokuqala: I-Ardor ingaphatha iseva yeJACK ngokuthembeke kakhulu, ngakho-ke akudingekile ukuthi sisebenzise i-QjackCTL noma okuhlukile, yize ingahlala isisindisa enkingeni yokubazi. Ngalesi sizathu, ngincoma ukuthi uchithe isikhathi ne-QjackCTL noma noJack kusuka esigungwini, bese usebenza kuphela kusuka ku-Ardor (uma kwenzeka kuyi-DAW yakho).
Ngiyaphinda ngithi: kufanele ngabe sesivele sazi ukuthi JACK eziyisisekelo futhi sibe neyethu multimedia distro. Noma iziphi izinkinga nge-JACK zizoba ngaphandle kwalolu chungechunge lokuthunyelwe.
Kulesi singeniso, ngizokwethula i-Ardor ngqo.
1 1. Izilungiselelo zomsindo / MIDI
2 2. Dala / Vula iSession
3 3. Iwindi Elikhulu
4 4. Isihlanganisi kusihleli bese uhlela uhlu
5 5. Umphathi Wokuxhuma Umsindo
6 6. Isihlanganisi
7 7. «Ngenisa» imenyu
1. Izilungiselelo zomsindo / MIDI
Uma singakaqali i-JACK phambilini, kuzoba yinto yokuqala esiyibonayo.
Ithebhu "yedivayisi" ibaluleke ngokukhethekile. Kuyo sizosungula amapharamitha ayisisekelo wesiphakeli somsindo seJACK.
Umshayeli: uhlobo lwesixhumi esibonakalayo somsindo. Njengoba kufanele wazi, amakhadi ahlanganisiwe noma we-usb asebenza ne-ALSA kanye ne-firewire ene-FFADO.
Isibonisi somsindo: kuya ngomshayeli esimkhethile, singakhetha phakathi kwawo wonke amadivayisi atholakalayo.
Usayizi webhafa: isici esiyisisekelo sokubambezeleka (ukubambezeleka) nokuqina kohlelo. Ubukhulu besayizi we-buffer, iphakama i-latency (kunconywa okungaphansi kwama-20 ms ukuze i-lag isivumele ukurekhoda ngaphezulu kwalokho esikulalelayo). Ngakolunye uhlangothi, okuncane ngosayizi we-buffer kuzoba nokubambezeleka okuncane, kepha ukusebenza okuphezulu kuzodingeka futhi kusuka ohlelweni. Nge-buffer engu-256 noma engu-512 kufanele urekhode ngaphandle kwenkinga, kuyilapho kunganconywa u-1024 noma ngaphezulu lapho uxubana noma wazi kahle, ngoba kulezi zigaba ukubambezeleka akubalulekile kangako.
2. Dala / Vula iSession
Ngemuva kokumisa iseva yomsindo, singavula iseshini yokurekhoda ekhona noma senze entsha. Lapho sakha iseshini entsha, kwenziwa isiqondisi sonke esihlela imininingwane nokulalelwayo okuhlukile kwephrojekthi yethu (njenganoma iyiphi i-DAW ebiza usawoti wayo).
Akunconyelwa ukuthi ufake lawa mafolda ngaphandle kokuthi ufuna ukukopisha ifayela elithunyelwa ngaphandle, ngoba ungaguqula imininingwane efanelekile yohlelo futhi onakalise iseshini. Yize yonke into ingahlanganiswa kabusha, kungcono ukugwema lowo msebenzi. Uma okufunayo ukuyisa iseshini kwenye i-PC, kufanele ukopishe yonke ifolda
Nge-Ardor singakha «izifanekiso». Lokhu kuzosigwema ukuthi sibe namaphrojekthi ayisisekelo anamathrekhi, amabhasi nama-plugins esiwafunayo ukuze singaphindi inqubo yonke ekurekhodweni kwesakhiwo esifanayo. Akusona isihloko esifanele manje, njengoba kuzoba ukungena kwami ​​okulandelayo ku-Ardor.
Ngakolunye uhlangothi, futhi singadala i- «izigcawu», okuhlukile kwephrojekthi okufinyeleleka kule menyu. Ngokufanayo, kuzoba yisihloko ongasibona kamuva.
3. Iwindi Elikhulu
I-interface enkulu ye-Ardor iqukethe izigaba ezilandelayo:
Ezokuthutha: Ukudlala nokudlala kwe-metronome, isikhathi ("kwangaphakathi" ngokuzenzakalela ngakho-ke i-Ardor ilawula ezokuthutha), imininingwane ye-JACK yeseva, iseshini, nezilungiselelo ze-punch.
Ukuhlela ibha yamathuluzi: abakhethi bemodi yokusebenza (ukuhlelwa kwesiqeshana, isifunda ...), usayizi wethrekhi nezilawuli zokusondeza, namasethingi e-mesh / grid (amaka ukusebenza kweziqeshana zomsindo nezifunda ngokuhlukaniswa kwesikhathi).
Isikhathi: uma sichofoza ngakwesokudla kuyo, kukhonjiswa imenyu lapho singakhetha khona imigoqo yesikhathi esiyifunayo: ikhodi yesikhathi, imethrikhi, itempo, isibhakela, iluphu, njll. Singaguqula noma siqambe kabusha izinkomba (imethrikhi, itempo, amamaki ezikhundla) ngokuzihudula noma ngokuchofoza kwesokudla.
Ama-Multitracks: isigaba esiqukethe ithrekhi yebhasi eyinhloko (ngokuzenzakalela) nawo wonke amathrekhi alalelwayo / ama-midi namabhasi esifuna ukuwafaka (ngokuchofoza kwesokudla noma kusuka kumenyu ye- «track»). Ngokuya ngobude bamathrekhi, kuzokhonjiswa izilawuli ezingaphezulu noma kancane.
Isifinyezo: buka ukwakheka kwesihloko sonke.
4. Isihlanganisi kusihleli bese uhlela uhlu
Kusuka kwimenyu ye- «Buka» singangeza lezi zingxenye ezimbili.
Isixubi kusihleli (kwesobunxele) sisivumela ukuthi siguqule wonke amapharamitha wokuxuba wethrekhi ekhethiwe (ama-plugins, okokufaka nemiphumela, i-pan…).
Uhlu lokuhlela (kwesokudla) lusivumela ukufinyelela konke okulalelwayo okuhlukile (okurekhodiwe nokucutshungulwayo), ukumiswa kwethrekhi namabhasi, amaqembu ... Iziqeshana ezilalelwayo noma izifunda zethula imenyu yokudonsela phansi ukukhomba konke ukuhluka okungenzeka bakwenzile . Ukusuka lapha singabadonsela emithambekeni.
5. Umphathi Wokuxhuma Umsindo
I- "mixer in editor" ilusizo kakhulu ukuxhuma wonke amathrekhi namabhasi ngemiphumela ehambelana nakho kanye nemiphumela, kepha kwesinye isikhathi sizozithola sesisesimweni sokwenza ukuxhumana okuningi (cabanga ngecala esifuna ukungenisa kulo amathrekhi ayi-6 we omama esifuna ukuhlangana nabo nebhasi elikhethekile). Ngalokhu, nokuningi, umphathi wokuxhumeka komsindo uzosenza sikhohlwe ngokuphelele ngamathuluzi afana ne-QJackCTL.
Uma ukuqopha kwethu sekuqediwe, sizosebenzisa cishe sonke esinye isikhathi kuleli windi (kufinyeleleka kumenyu noma nge-'Al + M '). Ungabona izigaba ezine:
Amathrekhi namabhasi (ngazo zonke, ZONKE izilawuli zazo: igama, okokufaka, isigaba, ukufaka, ukuthumela, i-pan, i-fader, okukhiphayo ... phakathi kwabanye).
Uzoqonda ukuthi lesi sigaba sibanzi kakhulu, ngakho-ke sihlala singena kokunye ukungena. Abenza njalo ekukhiqizeni umculo bazokwazi vele ukuthi benzeni ngawo.
7. «Ngenisa» imenyu
Ukuze uqale ukudlala ngayo, funa iphrojekthi oyithumele kumathrekhi (uma ungenayo, ungalanda eyodwa yaleyo enikezwe yi- «guru» UMike Senior).
Iseluleko sami kule menyu ethi "Ifayela> Ngenisa" kuzoba ukuthi ukhethe izinketho "zokungenisa lapho ungena ngemvume", "ukwenza imephu: ithrekhi eli-1 ngefayela ngalinye" kanye "nokukopisha amafayela ukuze uwahlele".
Abadali be-Ardor banqikaza impela ukuthi abantu basebenze nge-MP3, ngakho-ke abakwenzi kube lula. Uma amaphrojekthi wakho eyi-mp3, ungawaguqula nge-Audacity, i-terminal noma i-others. Imvamisa yesampula ayiyona inkinga, uma amafayela akho enenye i-Ardor izoyikhombisa ngokubomvu, kepha izowaguqula ngaphandle kwenkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-Ardor 3: Isingeniso
Inohlonze impela. Ngiyabonga!
UJose GDF kusho
Njengamanje ngiphelelwe yisikhathi ngalezi zinto, kepha uma ngibuyele esihlokweni somculo ku-GNU / Linux ngizoma lapha ukushaya. Ha ha ha!
Siyabonga ngalolu chungechunge. Ukubingelela.
Phendula uJosé GDF
Sawubona, angikakwazi ukuthola ukuthi ngingalungiselela kanjani i-Ardor ngendlela elula
, Kungokokuqala kulolu hlelo futhi angiqondi okuningi, uzokwazi ukukuchaza kangcono
ngemifanekiso ekhombisa ukuthi kufanele ilungiswe kanjani?
Kuvele ukuthi ngidinga ukuziqopha, ngithanda ukucula nokudlala isiginci, ngithanda ukuqopha izingoma zami
kukhompuyutha yami ephathekayo enombhobho wangaphakathi, ngoba anginayo eyodwa yokuyixhuma
Ngingakuthokozela kakhulu uma ungakwenza.
ngiyabonga kusengaphambili nemikhonzo!
ILibreOffice 4.1 RC 1 ikhishwe ukuzingela izimbungulu